Shinoa tanora vehivavy: ny Fiainana Fahazarana Ianao dia tsy Maintsy mamoy ho an'ny Fifandraisana Matotra
Shinoa tanora vehivavy: ny Fiainana Fahazarana Ianao dia tsy Maintsy mamoy ho an’ny Fifandraisana Matotra
Ity ny henjana amin’ny fahamarinana (ary raha efa nisy ny fifandraisana lehibe izay naharitra herintaona, fara fahakeliny, ianao angamba nianarako dia ny fomba mafy): tsy afaka manao ny zava-DREHETRA ianao te-tany nanao fifandraisana. Misy fiainana fahazarana sy ny fitondran-tena sexy tsara tarehy Sinoa fotsiny ny ankizivavy dia tsy handefitra. Raha toa ka efa lehibe ny fifandraisana ary dia tonga hatrany amin’ny mavesatra misotro, mijoko mba hafa iray Shinoa vehivavy ao amin’ny fampahalalam-baovao sosialy, dia nisy ihany koa ny fiarahana inflatable firaisana ara-nofo saribakoly, na dia tsy tena marina. Raha tena te hanao zavatra miara-miasa amin’ny Sinoa vavy — ka ianao tsy maintsy nitsambikina avy amin’ny Shinoa tanora ny vehivavy iray isaky ny roa volana — mety te-hiala amin’ny fanarahana ny fiainana fahazarana: Ity no sarotra indrindra fa ry zalahy izay ny fiainana ny»brothers alohan’ny hoes»fitsipika, izay, araka ny fomba, dia tokony ho avy amin’ny voambolana ho an’ny tsara.
Raha toa ka efa nivoatra ny fotoana izay mahazo farany ho amin’ny fifandraisana matotra, dia angamba tokony hanadino ny momba hangovers isaky ny faran’ny herinandro ary manana ny iray, maro loatra ny tifitra rehefa avy miasa. Na ianao mampiaraka tsara tarehy ny vehivavy Shinoa na tsara tarehy rosiana ny tovovavy, raha toa ianao hatao very maina loatra matetika (fotoana vitsivitsy isan-taona dia ekena, fa isaky ny faran’ny herinandro — tsy misy-misy.), tsy ho gaga ianao raha mahazo teny. Hanadino ny momba ireo antitra sarimihetsika anao rehefa nijery ireo ankizy izay lehilahy mahazo an-trano avy niasa, mahazo mamo, ary matetika kokoa noho ny tsy, mamono ny vadiny. Mety ho tia anao an-dalana ianao, fa misy hatrany ny mametra ny fomba lehibe dia afaka mahazo ny tsy fahazoana dumped. Manipy ny maloto atin’akanjo rehetra manodidina ny trano, tsy handrotsaka ny andro, manao akanjo mitovy ho an’ny volana, dia nitsoka ny orona no mahazo ny hevitra. Raha ireo no mampiavaka setra-olona, testosterone-avo fahazarana, dia tokony onja azy ireo veloma amin’ny fifandraisana matotra.
Ity iray ity dia mitovy amin’ny Tsy misy
zavatra ao amin’ny lisitra fa nivoaka nandritra ny alina manontolo tsy voatery ho tafiditra taonina booze. Raha toa ka ianao ao amin’ny fifandraisana matotra, vehivavy Shinoa dia tsy hametraka ny miaraka aminao mihantona avy amin’ny boîte de nuit na fisotroana miaraka amin’ny namany. Na dia antoko licence, dia mety te-hiresaka momba azy amin’ny sipa voalohany mba hisorohana ny ady taty aoriana. Eny ary, maheno antsika hoe: raha fantatrao ny mikasika ny Shinoa mampiaraka ny zavatra iray na roa, angamba ianao mailo fa tsara tarehy ny vehivavy Shinoa dia afaka ny ho tena saro-piaro. Noho izany, raha manana fahazarana ny mijoko zazavavy hafa ao amin’ny media sosialy — fandefasan-kafatra azy, eritreritsika ny sary, na ny ratsy kokoa, tsy misangy azy — ianao mijoro amin’ny fotoana baomba tsara teo. Ataovy ny I-afaka-get-misy vehivavy -te ny fitondran-tena ao ambadiky ny anao, satria ianao afaka fotsiny stalk na mpanadala amin’ny Shinoa tanora ny vehivavy te-tsy ny sipa mahazo tezitra. Tsy izany be dia be ny olana ny folo taona lasa izay — raha ara-bakiteny ny olona nahalala ny momba Sinoa mampiaraka an-tserasera. Ao amin’ny taona, na izany aza, nanjary iray amin’ireo olana fahita indrindra izay matetika mitarika ho vokany. Raha toa ka ianao ao amin’ny fifandraisana lehibe, manao ny tenanao (ary ny olon-tiany), ny famindram-po ary manao ny fiarahana amin’ny aterineto ny mombamomba ‘tsy mavitrika’. Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa tokony hiala ny fahazarana variana amin’ny alalan’ny iray Shinoa vehivavy isaky ny leo. Victoria Tanora dia vehivavy Sinoa izay mibilaogy momba ny fiarahana vehivavy Sinoa sy ny fomba hiatrehana ny fahasamihafana eo amin’ny Shinoa-Andrefana fifandraisana. Ianao rehefa miaraka amin’ny ankizivavy Shinoa sy ny samy ianareo no tena mavitrika amin’ny haino aman-jery sosialy, izany dia manara-penitra mba raha tsy tianao sexy rosiana ny zaza menavava ny totohondriny dia ny tarehiny na ny manakana tsotra fotsiny mandinika ny hafatra ho an’ireo izay mitady teny ny zazavavy ho amin’ny daty, eto izahay mba fahazoan-dalana Lata daty. Lata daty Reviews manampy anao tsaratsara kokoa ny hahafantatra ity toerana sy ny tolotra omeny
← Tsara Indrindra Maimaim-Poana Aziatika Mampiaraka Toerana